Beach soccer – Tournoi Pangalanes 2018 : Hiatrika ny manasa-dalana i Morondava sy Mahajanga -
AccueilVaovao SamihafaBeach soccer – Tournoi Pangalanes 2018 : Hiatrika ny manasa-dalana i Morondava sy Mahajanga
Beach soccer – Tournoi Pangalanes 2018 : Hiatrika ny manasa-dalana i Morondava sy Mahajanga
03/03/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Hangotraka ny fihaonana. Tafakatra hiatrika ny lalao manasa-dalana eo amin’ny taranja beach soccer amin’ny fiadiana ny Tournoi Pangalanes 2018 ny ekipan’i Morondava, Mahajanga sy Toliara ary Manakara, mpampiantrano ny hetsika. Izany hoe, ireo ekipa goavana avokoa no hiady ny ho tafavoaka amin’izany anio. Araka ny efa fantatra, dia tanterahina amin’izao fotoana izao ao Manakara ity hetsika eo ambany fiahian’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ity.
Hikatroka ny manasa-dalana voalohany i Morondava sy Mahajanga. Hanala vela eto ry zareo avy any Menabe, satria efa lavon’ny ekipan’i Boeny izy ireo teo amin’ny lalao voalohany tany amin’ny fifanintsanana. Nambaran’ny mpanazatra ny ekipan’i Morondava, Fabrice Soafiavy, fa tsy maintsy hanohitra an’i Mahajanga izy ireo. Notsiahiviny mantsy fa i Mahajanga no tompondakan’i Madagasikara farany raha tany amin’ny taona 2011 kosa no nandrombahan’i Morondava izany. “Tsy hanaiky lembenana izahay eo amin’ity manasa-dalana ity. Tsy maintsy mitady ny fomba rehetra handresena an’i Mahajanga izahay. Raha ny marina koa mantsy, tsy dia mifanalavitra loatra sy mitovitovy mihitsy aza ny haavo teknikanay”, hoy ny mpanazatran’i Morondava.
Ankoatra izay, dia notsindrin’ity mpanazatra ity hatrany fa anisan’ny tombony ho azy ireo ny fananany mpilalao mandrafitra ny ekipa nasionalin’ny beach soccer, toa an-dry Tsiliva, Giovanni sy Anderson, sns. Noho izay indrindra, dia hanao izay ho afany amin’ny hiakarana amin’ny lalao famaranana ny ekipan’i Morondava.
Eo amin’ny manasa-dalana faharoa, izay hifandonan’i Manakara sy Toliara indray, dia tsy maintsy hiaro ny voninahiny amin’ny maha mpampiantrano ny Tournoi Pangalanes azy ity ekipa avy amin’ny Faritra Vatovavy Fitovinany ity. Na izany aza anefa, manana ny fahaiza-manaony sy ny tanjany ihany koa i Toliara, izay saika nanjakazaka mihitsy teo amin’ny fifanintsanana. Hiady, araka izany, ny fihaonan’ny roa tonta eo amin’ny manasa-dalana.
Ankoatra izay, marihina fa fifaninanana eo ambany fiahian’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny Tournoi Pangalanes, izay natao indrindra ho an’ireo tanora mpitia fanatanjahantena amin’ireo faritra maro. Ny vola azo amin’ity hetsika ity kosa, raha ny fanazavan’ny mpikarakara, ny kolonely Nicolas Jean-Alex, hividianana fitaovana, toa ny ordinatera, sns, ho an’ireo lycée ao Manakara.
Roa volana aty aoriana no nahavitan’ny Frankôfônia dia mbola tsy mitsahatra ny milaza ny fahombiazan’izany fihaonana an-tampony izany izao tontolo izao. Niharihary tokoa mantsy ny fahombiazan’i Madagasikara manoloana iny fihaonan’ny Frankôfônia iny, ary tsy nitsahatra ...Tohiny